Xhaka Oo Guul Ka Horjoogsaday Arsenal, Burnley Oo Ku Badbaaday VAR & Gunners Oo Kaalinta 10aad Ku Dhegtay | Laacibnet.net
HomeWararka Ciyaaraha MaantaXhaka Oo Guul Ka Horjoogsaday Arsenal, Burnley Oo Ku Badbaaday VAR & Gunners Oo Kaalinta 10aad Ku Dhegtay
Xhaka Oo Guul Ka Horjoogsaday Arsenal, Burnley Oo Ku Badbaaday VAR & Gunners Oo Kaalinta 10aad Ku Dhegtay
March 6, 2021 Balaleti
Qalad weyn uu sameeyay Granit Xhaka ayaa ka hor istaagay Gunenrs inay seddexda dhibcood ka qaadatay kooxda Burnley oo ay marti u ahaayeen maanta iyadoo ay ciyaarta ku soo dhamaatay barbaro 1-1 ah.
Muuqaal caawiyaha garsooraha ayaa badbaadisay Burnley markii ay ka noqdeen go’aan uu garsooraha rigoore ugu dhigay Arsenal islamarkaana uu casaan ku siiyay mid ka mid ah xiddigaha kooxda Burnley Pieters. VAR ayaa sidoo kale labo jeer rigoore ka diiday Arsenal mar aheyd kubad gacanta lagu taabtay iyo mar Saka qalad lagu galay. Halka Leno uu labo fursadood oo cajiib ah ka beeniyay Burnley iyadoo Pepe uu isna fursado gool loo fishay ku qubeystay.
Natiijadaan ayaa ka dhigan inay Arsenal weli ku dhegan tahay kaalinta 10aad, waxayna fursad u siiyeen Leeds United oo 11aad ku jirta inay soo qabato haddii ay badiso kulanka u harsan inkastoo Gunners ay farqiga goolasha fiican tahay.
Tababare Mikel Arteta ayaa shan bedel ku sameeyay shaxdiisii kulankii ay ka badiyeen Leicester City. Waxaa kulankiisii ugu horeysay ee Premier League ee sannadkan 2021 ku soo bilowday Callum Chambers halka ay sidoo kale ku soo bilowdeen Thomas Partey, Martin Odegaard, Pierre Emerick-Aubameyang iyo Bukayo Saka.
Lix daqiiqo kaliya ayay ku qaadatay Arsenal inay hogaanka u qabato ciyaarta. Pierre-Emerick Aubameyang ayaa garabka bidix ka soo xarooday iyadoo Lowton iyo Tarkowski ay u ogolaadeen inuu kubada ka soo darbeeyo meel 15 mitir u jirta goolka. Goolhaye Pope ayaa damcay inuu hal gacan ku badbaadiyo laakiin waa uu awoodi waayay iyadoo kubada ay ku nasatay shabaqa.
Waa goolkii todobaad ee uu Aubameyang dhaliyo lixdii kulan ee ugu danbeysay ee uu u dheelay Arsenal.
Arsenal ayaa ciyaarta ku raaxeysaneysay iyagoo u diiday Burnley inay kubada la soo galeen xeradooda goolka, laakiin dadaalkoodii waxaa hal baac lagu lisay ka dhigay xiddiga khadka dhexe Xhaka oo u hadiyeeyay Burnley goolka barbaraha.
Daqiiqadii 39aad Arsenal ayaa damacday inay kubad u celiso Leno taasoo dhibaato u abuurtay Xhaka laakiin bedelkii uu kubada iska bixin lahaa, Xhaka uu damcay inuu kubada goolka hortiisa ugu soo karoos Luiz laakiin waxay ku dhacday Wood ka hor inta aysan gelin shabaq uusan waardiye joogin.
Waxaa qeybtii hore lagu kala nastay barbaro 1-1 ah iyadoo Burnley ay ku faraxsaneyd sida ay natiijada noqotay.
Qeybtii labaad Arsenal ayaa dadaal weyn u gashay inay hesho goolka guusha, iyadoo tababare Mikel Arteta uu bixiyay bartamihii qeybta labaad Odegaard iyo Willian isagoo soo geliyay Lacazette iyo Pepe.
Daqiiqadii 80aad Leno ayaa badbaadiyay Arsenal ka dib markii ay Burnley heshay fursad gool loo fishay. Pieters ayaa dhalin gaaray goolkii ugu fiicnaa xilli ciyaareedka. Kubad macaan ayuu ka soo qaaday meel 35 mitir u jirta goolka, laakiin waxaa sidii shabeelkii ugu kacay Leno oo iska bixiyay kubada.
Koornadii ka dhalatay ayay Burnley hadana ku sigeen goolka Arsenal iyagoo iska qasaariyay fursad weyn oo ay heleen markii ay kubada haeermariyeen goolka.
Burnley ayaa wacdarro dhigeysay dhamaadkii ciyaarta. Leno ayaa mar kale badbaadiyay Arsenal daqiiqadii 81aad. Vydra iyo Wood ayaa kubad isku dhiidhiibay. Iyadoo Wood uu kubada ku helay meel 15 mitir u jirta goolka. Laakiin goolhayaha ayaa block-gareeyay kubadii goolka loo fishay.
Daqiiqadii 83aad Pepe ayaa Arsenal ka qasaariyay kubad u baahneyd inuu shabaqa ku taabto.
Daqiiqadii 84aad ayay Arsenal mooday inay heshay fursadii ay seddexda dhibcood ku heli laheyd markii uu garsooraha u dhigay rigoore islamarkaana uu casaan u taagay xiddiga Burnley Pieters.
Kubad uu soo dhigay Pepe ayaa waxay garabka uga dhacday Pieters ka hor inta aysan ku dhicin birta, garsooraha ayaa mooday inuu Pieters si u la kac ah kubada gacanta ugu celiyay laakiin VAR oo dib u eegtay dhacdadaan ayaa xukmisay in laga laabto casaanka iyo rigooradaba.
Ilbiriqsiyadii ugu danbeeyay Ceballos ayaa birta garaacay iyadoo Gunners ay ku dhawaatay inay hesho goolka guusha.
Waxay ciyaarta ku soo dhamaatay barbaro 1-1 ah iyadoo labada kooxood ay dhibcaha kala qeybsadeen.
Kabtanka Arsenal Ee Aubameyang Ee Duumadu Ku Dhacday Oo La Go'aamiyey Waqtiga Uu Kusoo Noqonayo Kooxda
WOW: Maxay Tahay Sababta Uu Steven Gerrard Ugu Dabaaldegay Guushii Arsenal Ee Europe League? Akhriso Waxa Kaga Xidhnaa
Saadaasha Dimitar Berbatov Ee Kulamada Toddobaadkan - Liverpool Oo Uu Guul Uga Dhaartay & Waxa Uu Ka Yidhi Arsenal & Man United